Taxanaha xagaaga ee ugu farxadda badan oo ay bixiyaan aaladaha | Bezzia
Susana godoy | 21/06/2022 14:00 | Wararka
Waxaan had iyo jeer jecel nahay taxanaha xagaaga marka xilli ciyaareedkan yimaado. Sida aan u jecelnahay in aan nafteena dhex galno xilliga kirismaska ​​​​dhammaadka sanadka, hadda waxaan u beddelnaa wax walba meelaha jannada ah, xeebahaas aadka u wanaagsan iyo cimiladaas wanaagsan. Sidaa darteed, haddii aadan weli haysan fasax, waxaad jeclaan kartaa inaad ku raaxaysato beddelka ay aaladuhu ku siiyaan.
Maadaama ay ku fiican yihiin inay dhadhamiyaan rabitaanka cuntadaada Fasaxa xagaaga soo socda ayaa ku dhow dhow. Taxanaha xagaaga ee aan helnay waxay leeyihiin meelo ku qaban doona haddii aad rabto inaad ku raaxaysato noocyada kala duwan ee mawduucyada. Markaa, waa waqtigii lagu sharadsiin lahaa mid kasta oo ka mid ah kuwa aan hoos ku xusno.
1 xagaagii waan jeclaaday
3 tartanka xagaaga
4 Xilliga xagaaga
xagaagii waan jeclaaday
Taxanaha sida aadka ah loo hadal hayo waxaa ka mid ah kan. Sababtoo ah 'Xagaagii aan jeclaaday' waa mid ka mid ah sheekooyinka dhallinyaradu had iyo jeer xidho. Waa laqabsiga buugaagta Jenny Han sheekadan waxaan ku raaxaysan karnaa mowduucyo ay ka mid yihiin jaceylka koowaad laakiin sidoo kale xiriirka ka dhexeeya hooyada iyo dhallaanka iyo sidoo kale koorsada xilliga xagaaga iyo dhammaan maaddooyinka uu nooga tago si aan uga dhigno kuwa ugu fiican. . Dabcan, haddii aan in badan diiradda saarno doodiisa, waa in la yiraahdo waa saddex xagal jacayl oo ka kooban gabadh yar iyo laba walaalo ah. Waxaad horeyba ugu heysatay Amazon Prime iyo dabcan, waa mid ka mid ah dalabyada ugu wanaagsan ee lagu bilaabi karo nolosha hadda.
Inta u dhaxaysa taxanaha xagaaga waxaan sidoo kale helnaa harooyinka si ay u awoodaan inay u qaboojiyaan sida aan u qalano. Mar labaad waa inaan xusnaa taas Waxaad ka heli doontaa Amazon Prime oo kiiskan waa majaajillo, oo leh cutubyo gaagaaban oo si degdeg ah loo arko. Waxa aanu niyadda ku gelinay: Waxa ay ku saabsan tahay nin muddo dheer dibadda ku noolaa, ilaa uu maalin uun go’aansaday in uu Kanada ku laabto si uu ula midoobo inantiisii ​​oo uu u soo korsaday. Laakiin wuxuu ogaaday in wax walba aysan u qurux badnaan doonin sidii la filayay, maadaama ay jirto dhaxal ku lug leh oo aan u soo bixin sidii la filayay. Hadda waa inaad aragto isagoo dhammaystiran si aad u awooddo inaad ogaato sida uu ku dhammaanayo.
Waa taxane ka kooban 10 qaybood oo haddii aad jeceshahay dabaasha, markaa ma seegi kartid. Waxay ahayd horraantii Juun markii 'Xagaaga Loolanka' ayaa ku soo degay Netflix. Dhexdeeda waxaad ku raaxaysan kartaa muuqaalka Australia iyo dabcan, xeebaheeda. Anagoo aan hilmaamin in aan sidoo kale wajaheyno riwaayad dhalinyaro maadaama jilayaasheeda ay tahay Xagaaga. Gabadh yar oo caasi ah ayaa laga saaray dugsigeedii sare ee New York. Sidaa darteed hooyadeed waxay u dirtay magaalo yar. Waxaan had iyo jeer siin karnaa fursad uu ku arko sida sheekadan oo dhami ku dhammaanayso, miyaadan u malaynayn?
Mar labaad waxaan joognaa Netflix si aan ugu raaxeysano taxanahan kale. Sida aan arki karno, cinwaankiisu wuxuu inoo sheegayaa wax ka badan intii aan filan karno. Cimilada wanaagsan iyo shaqada xagaaga waxay ka dhigaan koox dhalinyaro ah inay is bartaan. Afartu aad bay u kala duwan yihiin laakiin waxay ku midoobeen iyada oo ay ugu wacan tahay goob dalxiis oo raaxo leh iyo janno jasiirad ah. Markaa, waxay yihiin walxo kaamil ah oo lagu sii wadi karo sharadka taxanaha kale ee soo kicin doona xilli ciyaareedkan. Hadda waxay leedahay 8 qaybood iyo hal xilli. Laakiin waxay ku filan tahay inay awoodaan inay ogaadaan dhammaan siraha ay qariyaan iyo sidoo kale imaatinka jacaylka. Cocktail a socon doona meel fog oo aadan seegi karin. Waa maxay taxanaha xagaaga ee aad aragtay?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Wararka » Taxanaha xagaaga ee ugu nasashada badan ee ay bixiyaan aaladaha